Global Voices teny Malagasy » Tanora Saodiana Voasambotra Noho Ny “Faniratsiràna Ny Fivavahana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jona 2013 22:46 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Lehilahy Saodiana roa no voasambotry ny Kômitin'ny Fampiroboroboana ny toetra tsara sy Fisorohana ny toetra ratsy (CPVPV)  tany Riyadh renivohitra noho ny faniratsiràny ny fivavahana . Nizara ny tantarany tao amin'ny Twitter i Bader Al-Rasheed @BAlrasheed  sy Abdullah Al-Bilasi @3bdlla .
Araka ny voalazan'i Al-Rasheed, nipetraka teo ivelanà trano fisotroana kafe iray izy ireo raha iny nisy fiaran'ny mpikambana ao amin'ny CPVPV niantso ny vahoaka hiala io faritra io hanatanterahana ny fivavahana amin'ny hariva. Nilaza ho nifamaly tamin'ilay mpikamban'ny CPVPV izy momba ny tsy maha-ara-dalàna ny fipetrahana amin'ireo toeram-bahoaka amin'ny fotoana fivavahana.
Nitoraka bitsika i Al-Rasheed taty aoriana [ar]:
@BAlrasheed:  لأني أول مرة أسمع بهذا النظام ولعلمي بأن الهيئة ومعظم الأجهزة الأمنية أحياناً يتصرفون حسب مزاجهم ويختلقون لك قوانين غير موجودة
“@BAlrasheed:  Koa satria voalohany izao nahenoako ny momba io lalàna io sy ny fihetsika manaotao foanan'ny heya indraindrai (heya no iantsoana ny CPVPV ), nankeny amin'ny fiaran'izy ireo aho ary nanontany: misy lalàna va mandrara ny fipetrahana eny amin'ireo toerana ho an'ny daholobe mandritra ny fotoana fivavahana?”
Namaly ilay mpiasa fa haram (voararan'ny fivavahana) izany, nefa notapahan'i Al-Rasheed izany tamin'ny fitenenany hoe:
“@BAlrasheed:  Aza miteny amiko ny voalazan'ny finoana, misy lalàna ve? Ny fivavahana dia safidin'ny tena manokana. Ny lalàna ihany no tsy maintsy hajaiko.”
Araka ny voalazan'i Al-Rasheed, tezitra ilay mpiasa ary nitaky ny karapanondrony sy ny an'ilay namany.
Avy eo, nanomboka nandrahona azy ireo ilay mpikambana ao amin'ny CPVPV ary namporisika ny mpitandro filaminana handray fepetra mikasika azy ireo. Minitra vitsy taty aoriana, nisy fiaran'ny CPVPV iray hafa sy fiaran'ny mpitandro filaminana tonga nisambotra azy ireo ary nitondra azy tany amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana ao al-Sulaimaniyah.
Niresaka momba ireo toetra fanaovana tsinontsinona ny maha-olombelona tao amin'ireo tranokely fihazonana i Al-Bilasi: “Kely sady feno olona ilay izy. Tsy nisy na fandriana na koa kidoro iray aza ,” hoy izy. “Natory tamin'ny tany izahay. Nanontany mpiasa iray aho hamela ahy hatory any amin'ny lalantsara nefa nanompa ahy fotsiny izy,” hoy ihany izy.
Ny ampitso maraina, nalaina ho any amin'ny Birao Fanadihadiana Sy Fampanoavana izy ireo, niaraka tamin'ny rojo vy. Rehefa tonga tany izy ireo, nentina tanatinà efitra kely iray izay niandrasany nandritra ny ora maro talohan'ny niantsoana azy ireo hohadihadiana misaraka. Nilaza tamin'i Abdullah ilay mpanadihady fa “tsy mahazo hifandirana” ireo mpikambana ao amin'ny CPVPV sy ireo mpitandro filaminana fa “hankatoavina.”
Nifarana izany nofy ratsy izany rehefa navotsotra izy ireo taorian'ny nandoavan'ny ray aman-drenin'izy ireo onitra na dia nantsoin'ilay mpanadihady ho “tsy fifankazahoan-dresaka” aza ilay zava-nitranga. Tsy afa-po tamin'izany ireo mpitandro filaminana mpino ary nangataka ny hitsarana azy roa.
Ny mbola mahazendana koa, nitatitra  tantaranà lehilahy Libaney iray izay hitan'izy ireo tany amin'ilay tobin'ny mpitandro filaminana tany al-Sulaimaniyah i al-Bilasi sy al-Rasheed, izay voasambotra noho ny “fitsiky tsy mifanaraka amin'ny fivavahana”!
@balrasheed : Iray amin'ireo tantara tena hafahafa hitanay nandritra ny fitànana anay dia ny an'ilay lehilahy Libaney iray izay voampanga hiditra an-tranomaizina mandritra ny dimy andro. Ny heloka nataony: “fitsiky tsy mifanaraka amin'ny Sharia.”
Nitranga ny 25 Martsa 2013 izany raharaha izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/18/49008/
 faniratsiràny ny fivavahana: https://twitter.com/balrasheed/status/317281166745010176